musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Ukraine neEuropean Union vanosaina Chibvumirano cheOver Skies
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Ukraine Kuputsa Nhau
Chibvumirano cheEU-Ukraine Open Skies Chibvumirano chinofanirwa kugoneswa neUkraine uye nhengo yega yega yeEuropean Union kuti itange kushanda.
Chibvumirano cheCommunity Civil Area Chibvumirano chinotarisirwa kuvhura Ukraine kusvika kune yakawanda-inodhura nzira uye inosimudzira kushanya.
Parizvino, Ukraine ine chibvumirano chemubatanidzwa wemhepo nenyika dzese dzeEuropean Union.
Chibvumirano chitsva neEU chinoti zvirambidzo pahuwandu hwendege zvichasimudzwa.
European Union (EU) neUkraine vakasainirana Chibvumirano cheAviation Aviation Area Chibvumirano icho chinosimbisa nzvimbo yekudyidzana yendege, akadaro mutungamiriri venhau veUkraine.
Chibvumirano cheCommunity Civil Aviation Area Chibvumirano, chinonyanya kuzivikanwa seChipatara Chematenga Akavhurwa, chinotarisirwa kuvhura Ukraine kusvika kumigwagwa ine mutengo wakaderera uye kusimudzira kushanya, nekuda kwekumanikidzirwa kuita kweEuropean zviyero nemitemo mumunda wekufambisa kwemhepo.
Parizvino, Ukraine ine zvibvumirano zvemabhizimusi emhepo nenyika mbiri dzeEU. Vanoisa zvirambidzo pahuwandu hwevatakuri uye nendege dzevhiki nevhiki. Izvi zvakaita kuti zviomere vatakuri vatsva kupinda mundege dzakakurumbira.
Chibvumirano chitsva ne EU inotaura kuti zvinorambidzwa pahuwandu hwevatakuri uye nendege zvichasimudzwa. Chero anotakura mweya anozokwanisa kubhururuka munzira dzakakurumbira, kwete monopolists chete. Izvi zvinoreva kuti ndege dzinodhura dzinowana mukana wekupinda mumusika.
Ryanair, kune imwe, yatove yakazivisa "kuwedzera zvine hukasha" muUkraine kana nyika yabatana neOver Skies yakadzora musika wekubhururuka, nehurongwa hwekuvhura nendege kubva kunhandare gumi nembiri dzeUkraine pachinzvimbo chezvino 12, pamwe nekuvhura mabasa epamba.
Pamwe pamwe nendege nyowani, vafambi vanogona kutarisira mamwe mashoko akanaka - mitengo yetikiti inotarisirwa kudonha semhedzisiro yekukwikwidza uye kupera kwemamongi kune dzimwe nzvimbo dzinozivikanwa. Zvakare, mitengo ichadzikiswa nekuda kwechibvumirano chinopa kodzero kune chero kambani yekufambisa ndege kubata vanofamba nendege.
Kunze kwevatakuri, nhandare dzendege dzeUkraine dzinotarisirwa kuwana mibairo kubva shanduko. Ivo vanozogashira dzimwe ndege uye vove nehukuru hwevapfuuri kuyerera. Izvi zvinoreva kuti nhandare dzenharaunda dzichava nemikana yakawanda yekudyara nekusimudzira.
Imwezve yekuwedzera kwechibvumirano chevatakuri veUkraine kuunzwa kwe European Union tsika nemitemo muUkraine civil avhiyesheni.
Mhemberero yekusaina iyi yakapindwa neMutungamiri weUkraine Volodymyr Zelensky, Mutungamiri weEuropean Council Charles Michel, uye Mutungamiri weEuropean Commission Ursula von der Leyen.
Chibvumirano, chakanyorerwa pamusangano wechi23 weUkraine-EU muKiev, chichavhura misika yemuchadenga yeUkraine neEU uye inosimbisa kuchengetedzeka kwemhepo, traffic yemhepo, uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, vezvematongerwo enyika vakataura muchitauti.
Chibvumirano cheEU-Ukraine Open Skies Chibvumirano chinofanira kugamuchirwa neUkraine uye yega European Union nhengo yenyika kuti itange kushanda.